सूर्यग्रहणको वैज्ञानिक र धार्मिक मत -
२०७६, ९ पुष बुधबार १६:३१ December 25, 2019 clickonLeaveaComment on सूर्यग्रहणको वैज्ञानिक र धार्मिक मत
जसानुसार काठमाडौँमा ०८ः४३, महेन्द्रनगरमा ०८ः३८ र भद्रपुरमा ०८ः४८ मा ग्रहण शुरु हुनेछ । यसैगरी ग्रहणको मध्य पनि काठमाडौँमा १०ः०१, महेन्द्रनगरमा ०९ः५२ र भद्रपुरमा ०९ः५९ मा हुनेछ । ग्रहणको अन्त्य काठमाडौँमा ११ः३३, महेन्द्रनगरमा ११ः१९ र भद्रपुरमा ११ः२७ मा हुने समितिले जनाएको छ ।
यसैगरी ग्रहण अवधि काठमाडौँमा दुई घण्टा ५० मिनेट, महेन्द्रनगरमा दुई घण्टा ४३ मिनेट र भद्रपुरमा दुई घण्टा ५३ मिनेटसम्म रहनेछ । यसैगरी सूर्यग्रहणको दिप्तीक्रम काठमाडौँमा ०.५०१, महेन्द्रनगरमा ०.५११ र ०.४७४ हुनेछ । ग्रहण प्रतिशत भने काठमाडौँ र महेन्द्रनगरमा ३९ एवं भद्रपुरमा ३६ रहने जनाइेको छ ।
यसपटकको सूर्यग्रहण नेपालबाट बिरल छायाँ र खण्डग्रासमात्र देखिने छ । पृथ्वीको केही भागको करिब १०० किमिको ब्याण्डबाट बलायाकार वा रिङ ग्रहण अवलोकन गर्न सकिने छ । चन्द्रमाको छायाँको व्यास सूर्यको भन्दा सानो भएकाले बीच भाग ढाके पनि किनारबाट केही प्रकाश वरिपरि रिङजस्तो देखिने निमित्त कार्यकारी निर्देशक शर्माले जानकारी गराउनुभयो । यस्तो अवस्थालाई ‘रिङ अफ फायर’ भनिन्छ । साउदी अरबबाट ‘रिङ अफ फायर’ देखिन शुरु हुन्छ ।
कतार, युएई, ओमान, दक्षिण भारत, उत्तरी श्रीलङ्का, बङ्गालको खाडी, मलेसिया, इण्डोनेसिया, सिङ्गापुर, उत्तरी मेरियाना द्वीप, फिलिपिन्स हुँदै प्रशान्त महासागरको गुआम टापुमा पुगेर अन्त्य हुनेछ । बिरल छायाँ भने पूर्वी युरोपको केही भाग, एशियाको अधिकांश भाग र अष्ट्रेलियाको उत्तरी भागबाट देख्न सकिने समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
यसैगरी बलायाकार सूर्यग्रहण काठमाडौँबाट देखिने छैन । यहाँबाट खण्डग्रास सूर्यग्रहण मात्र अवलोकन गर्न सकिने छ । सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउदा चन्द्रमाले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई छेक्छ । सूर्यको प्रकाश चन्द्रमाले छेक्दा पृथ्वीमा पर्ने छायाँलाई नै सूर्यग्रहण भनिन्छ ।
सूर्य ग्रहणको समयमा मानवमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि वैज्ञानिक आधार प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भने ग्रहणको मानिसमा प्रभाव शास्त्रीय विश्लेषणानुसार चार प्रहर अर्थात् १२ घण्टा अघिदेखि नै सुतक लाग्ने जनाएको छ ।
जसानुसार बुधबार बेलुकी ८ः४३ बजेदेखि नै बालक, वृद्ध र बिरामीबाहेकलाई भोजन निषेधको शास्त्रीय वचन रहेको समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधनालगायत कर्म गर्न भने शुभ हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
ग्रहणका समयमा सुते रोग लाग्ने, पिसाब गरे दरिद्र, दिसा गरे कीरा भएर जन्मने, मैथुन गरे गाउँको सुँगुर भएर जन्मने, सिङ्गार पटार गरे कुष्ठ रोगी, भोजन गरे अधोगति, बन्धनमा राखे सर्प भएर जन्मने, काटमार गरे नरकमा बास हुने उल्लेखित धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ । पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस
BREAKING NEWS ::: रबी लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की रिहा
२०७६, ९ भाद्र सोमबार १८:५५ August 26, 2019 clickon
आखिरकार सरकार र डा. गोविन्द केसीको वार्ता असफल भयो !!! किन होला??
२०७५, १० श्रावण बिहीबार ०१:०१ July 26, 2018 clickon